Sivavanye i-Mujjo, iiglavu zesikrini esenziwe ngeTouch ezimbini kwaye songeza ikhowudi yesaphulelo se-10% | Iindaba zeGajethi
Sivavanye i-Mujjo, iiglavu zesikrini sokuchukumisa ezibekwe kabini kwaye songeze ikhowudi yesaphulelo se-10%
Ngoku siphakathi kwiphulo leKrisimesi, yeyiphi indlela ebhetele kunokuba nemibono yezipho okanye izipho ezizezethu kwaye kule meko sinemveliso esoloko ilungile ukuba nayo xa kubanda, iiglavu ezishushu ngokwenene izandla zethu.
Ngale ndlela, xa sibeka iiglavu, umbuzo wokuqala oza engqondweni namhlanje ungaphezulu kwesinye, ngaba zithambile? kule meko impendulo iyavuma kwaye ayingomnwe omnye okanye emibini, iseti iphela iyabambeka kwaye badibanisa uhlobo abicah entendeni yesandla ukuze isiphelo sethu singatyibiliki Ngelixa silisebenzisa ngeiglavu.
1 Uyilo kunye nezinto zokuvelisa
2 Ukuhambelana kunye nokusetyenziswa
3 Ixabiso elinesaphulelo sabafundi beGajethi yeeNqobo
Uyilo kunye nezinto zokuvelisa
UMujjo, luphawu oluneemveliso ezivela esemgangathweni kuyilo kunye nezinto zokuvelisa, ke ngekhe sibenangxaki kule meko kwaye kwimeko yeigloves esinazo etafileni, iTouch Layered screen, asinakutsho ukuba oku kuyasilela.
Izinto zokuvelisa zizezofele kwinxalenye ephezulu, zongeza isilivere, inayiloni kunye nentambo ye-spandex ngaphandle ukuze iiglavu zithinteke ngokupheleleyo kwii-smartphones okanye iipilisi zethu kwaye ziguquguquke ukuze zikwazi ukuvala isandla kakuhle kwaye ngaphakathi zongeza i-acrylic Ngobungqingili obuphindwe kabini obugqume ngokugqibeleleyo kubanda.
Ukuhambelana kunye nokusetyenziswa
Iiglavu zeMujjo ziyahambelana nezikrini zokuchukumisa zazo zonke izixhobo ezikhoyoI-iPhone, i-Blackberry, i-Samsung, i-HTC, i-LG okanye nayiphi na ifowuni yesikrini esiyisebenzisayo iya kuhambelana neiglavu ke oku akuyi kuba yingxaki.
Icala elisezantsi leiglavu lokususa ingxaki ngaphandle kwamathandabuzo kukuba azinamanzi, kwaye ukuba sizimanzisa kakhulu sizakuphulukana neempawu ezixineneyo kwaye asizokwazi ukuzisebenzisa. Kwelinye icala, ukusebenza kwayo kukwiimeko ezomileyo, ingqele ayizukusichaphazela kobu busika ngezi glavu zivela kuMujjo. Kule mpelaveki iphelileyo Sivavanye ngamaqondo obushushu aphakathi kwe-0 kunye ne-7 degrees celcius kwaye inyani kukuba baziphethe kakuhle. Baneqhosha kwinxalenye ephezulu yesihlahla esivumela ukuba siyivale ngokupheleleyo iglavu kwaye ayivumeli ukubanda kudlule, kushushu ngokwenene.
Enye into kwezi glavu kukuba ziiglavu nje, asinxibi kwanto ebonisa ukuba ziiglavu ezichukumisayo kwaye ndiyayithanda le nto. Abanxibi nantoni na ebachazayo okanye etsalela ingqalelo kubuchule babo bokuthamba kwaye le yindawo yokudibanisa kum.
Ixabiso elinesaphulelo sabafundi beGajethi yeeNqobo
Ixabiso lezi Mujjo Double Layered Touchscreen gloves alinanto yokwenza nento esinokuyifumana kwiivenkile zaseTshayina okanye nakwiivenkile ezinkulu. Ixabiso lezi zi-euro ezingama-34,95 kodwa kwabo bafundi be-Actualidad Gadget abafuna ukuzithenga, uMujjo usinika ikhowudi yesaphulelo yokongeza: inyanigadget esiza kuthi ngayo samkele i I-10% isaphulelo sishiya ixabiso lokugqibela elisele kwi-31,45 ye-euro ngokuthumela ngokwahlukeneyo. Iiglavu zingathengwa ngqo kwi Iwebsite yomenzi uMujjo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » Izixhobo » Sivavanye i-Mujjo, iiglavu zesikrini sokuchukumisa ezibekwe kabini kwaye songeze ikhowudi yesaphulelo se-10%